Madaxweyne Farmaajo oo amar ku bixiyay in dhaawaca C/xamiid Karzaay dibadda loo qaado – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo amar ku bixiyay in dhaawaca C/xamiid Karzaay dibadda loo qaado
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta amar ku bixiyay in dalka dibadiisa loo qaado dhaawaca farsamo yaqaanka teleefishinka UNIVERSAL xaruntiisa magaalada Muqdisho C/xamiid Maxamed Karzaay, kaas oo maanta ku dhaawacmay qarax loogu xiray gaarigiisa.
Madaxweyne Farmaajo oo maanta xarunta madaxtooyadda kulan kula yeeshay milkiilaha TV-ga UNIVERSAL Injineer Axmed Abuubakar iyo agaasimaha teleefishinka ee bariga & bartamaha Afrika C/laahi Xirsi Kulmiye ayaa kulankaasi lagu go’aamiyay in dhaawaca farsamo yaqaan C/xamiid Maxamed Karzaay oo aad u culus loo qaado magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Farsamo yaqaan C/xamiid Maxamed Karzaay ayaa lagu wadaa in maalinta berri dhaawaciisa loo qaado magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar, iyadoona deeqdaan caafimaad uu madaxweyne Farmaajo u fidiyay farsamo yaqaankaan ay noqonayso tii labaad uu madaxweynaha u fidiyo qof shacab ah oo qarax ku dhaawacmay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa deeq caafimaad oo dibadda ah hore ugu fidiyay dhowr caruur oo ku dhaawacantay weerar hoobiyaal ah oo maalintii caleemo saarkiisa kusoo dhacay guri ay caruurtaasi deganaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muddooyinkii ugu dambeysay soo batay qaraxyada lagu xiro gaadiidka gaarka loo leeyahay oo lagu waxyeeleeyo bulshada Soomaaliyeed iyo mas’uuliyiinta dowladda ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.